Umbiko omusha we-WTTC wokuqhuba ukululama nokuthuthukisa ukuqina komkhakha Wezokuvakasha Nezokuvakasha
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Umbiko omusha we-WTTC wokuqhuba ukululama nokuthuthukisa ukuqina komkhakha Wezokuvakasha Nezokuvakasha
Airlines • Airport • Izindaba Zezinhlangano • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba Zokunethezeka • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Izindawo zokuhlala • Unomthwalo wemfanelo • I-Saudi Arabia Breaking News • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
Umbiko omusha we-WTTC wokuqhuba ukululama nokuthuthukisa ukuqina komkhakha Wezokuvakasha Nezokuvakasha.
Umkhandlu weWorld Travel & Tourism ubambisana noMnyango Wezokuvakasha waseSaudi Arabia ngombiko omusha obalulekile ogqamisa amaphuzu abalulekile okubuyisa ukuhamba kwamazwe omhlaba, nezincomo zokuqhuba ukuvuselelwa komkhakha wezokuvakasha nezokuvakasha, ngenkathi kuthuthukiswa ukuqina kwawo.
Izindleko eziphakeme zokuhlola kanye nemikhawulo eqhubekayo yokuhamba ivimbela ukufinyeleleka kohambo futhi idale uhlelo lwe-elitist.
Njengoba u-34% kuphela wabantu bomhlaba abagonywe ngokugcwele, ukungalingani kokugoma kusongela ukusimama komnotho.
Umnikelo walo mkhakha ku-GDP yomhlaba wehle usuka cishe ku-US$9.2 trillion ngo-2019, wafinyelela kuma-US$4.7 trillion ngo-2020, omele ukulahleka cishe kwezigidigidi ezingama-US $4.5.
The Umkhandlu Wezwe Wokuvakasha Nezokuvakasha (WTTC) futhi UMnyango Wezokuvakasha weSaudi Arabia yethule namuhla umbiko omusha obalulekile ogqamisa amaphuzu abalulekile okubuyisela ukuhambahamba kwamanye amazwe, kanye nezincomo zokuqhuba ukusimama komkhakha Wezokuvakasha Nezokuvakasha, kuyilapho uthuthukisa ukuqina kwawo.
Njengoba lolu bhubhane lwenza uhambo lwamazwe ngamazwe lucishe lucishe luphelele, ngenxa yokuvalwa kwemingcele kanye nemikhawulo enzima yokuhamba, iTravel & Tourism ihlupheke kakhulu kunanoma yimuphi omunye umkhakha ezinyangeni eziyi-18 ezedlule.
Igalelo lomkhakha ku-GDP yomhlaba wonke lehle lisuka cishe ku-US $ 9.2 trillion ngo-2019, laya ku-US $ 4.7 trillion kuphela ngo-2020, okusho ukulahleka cishe kuka-US $ 4.5 trillion. Ngaphezu kwalokho, njengoba ubhadane ludabula inhliziyo yalo mkhakha, kwalahleka imisebenzi eshaqisayo eyizigidi ezingama-62 yezokuvakasha nezokuvakasha.
Lo mbiko omusha uyagqamisa I-WTTCUkuqagela kwakamuva kwezomnotho okudalula ukusimama komkhakha kuzohamba kancane kunalokho obekulindelwe kulo nyaka, okuhlobene kakhulu nokuvalwa kwemingcele okuqhubekayo kanye nezinselelo ezixhumene nokuhamba kwamanye amazwe.
Igalelo lomkhakha kwi-GDP kulindeleke ukuthi lenyuke ngo-30.7% ngonyaka ngonyaka ka-2021, okumele kukhushulwe ama-US $ 1.4 trillion kuphela, kanti ngezinga lokululama, umnikelo weTravel & Tourism ku-GDP ungabona unyaka ofanayo- inyuke ngo-31.7% ngo-2022.
Khonamanjalo, imisebenzi yalo mkhakha kulindeleke ukuthi inyuke ngo-0.7% kulo nyaka, okumele kube yimisebenzi eyizigidi ezimbili kuphela, kulandele ukwenyuka ngo-18% ngonyaka ozayo.
Imele inselele embi kakhulu yomkhakha Wezokuvakasha Nezokuvakasha, i-COVID-19 ayizange nje ibe nomthelela emnothweni womhlaba, kodwa futhi nenhlalakahle kanye nempilo yabantu emhlabeni wonke.
Ngaphambi kokuthi lolu bhubhane luqale ukuba nomthelela omubi kulo mkhakha, i-Travel & Tourism ibingomunye wemikhakha emikhulu emhlabeni jikelele, ibhekele umsebenzi owodwa kwemine emisha eyakhiwe emhlabeni wonke phakathi kuka-2015-2019 futhi yaba nomthelela obalulekile ekuthuthukisweni kwenhlalakahle yezomnotho kanye nokunciphisa ubuphofu, ehlinzeka ngendlela eyingqayizivele. amathuba kwabesifazane, idlanzana, imiphakathi yasemakhaya, kanye nentsha.
Lo mbiko omusha ovela I-WTTC, ngokubambisana ne UMnyango Wezokuvakasha weSaudi Arabia kuveza amaphuzu ezinhlungu agxile enseleleni ephuthumayo yokubuyisela ukuhamba kwamanye amazwe, ehlelwe yisidingo sokubhekana nobuthakathaka bomkhakha okhonjiswe phakathi nobhubhane ngokuklama kabusha ikusasa elisimeme, elibandakanyayo, neliqinile.
Lo mbiko omusha obalulekile ubonisa ukuthi ukuvalwa kwemingcele yamazwe ngamazwe, ukungaqiniseki ngenxa yokushintsha kwemithetho, izindleko ezinqatshelwe zokuhlola, kanye nokuntuleka kokubuyisana kanye nokukhishwa kokugoma okungalingani kuvimbele ukutholwa komkhakha Wezokuvakasha Nokuvakasha phakathi nezinyanga eziyi-18 ezedlule.
NgoJuni 2020, wonke amazwe ayesenohlobo oluthile lwemikhawulo yokuhamba, edlala indima ebalulekile ekwehleni kwezindleko zamazwe ngamazwe ngama-69.4% ngalowo nyaka. Le mikhawulo, ehlala ishintsha futhi edidayo, iqhubekile nokuba nomthelela omkhulu ekuthembekeni komhambi ekubhukheni, njengoba ibingekho indlela ecacile, noma ukuvumelana komhlaba wonke, ngokwezidingo zokuhlola, ukuvalelwa yedwa, namazinga okugoma.
Ngokwalo mbiko, ucwaningo lwakamuva lomuzwa wabahambi olushicilelwe ngu-Oliver Wyman lukhombisa kuphela u-66% wohlelo lokuhambela phesheya ezinyangeni eziyisithupha ezizayo, futhi abangaphansi koyedwa kwabayishumi (10%) babekise uhambo oluzayo, okukhombisa ukungaqiniseki okuqhubekayo izinqumo zabahambi. Ukuhlola okumba eqolo kwe-PCR kuyaqhubeka nokuba nomthelela omubi kubahambi, kubuyisela emuva noma iyiphi inqubekelaphambili yokwenza uhambo lufinyeleleke nokudala ukungalingani okwengeziwe.
UJulia Simpson, uMongameli kanye ne-CEO I-WTTC, uthe: “Umkhakha Wezokuvakasha Nezokuvakasha ubalulekile ezimpilweni eziningi eziqhubeka nokuthinteka ngenxa yokwehluleka ukuvumelanisa nokwenza imithethonqubo ye-COVID-19 ibe sezingeni emhlabeni wonke. Asikho isizathu sokuxoshwa kwemithetho, amazwe adinga ukujoyina futhi avumelanise imithetho. Amazwe amaningi asathuthuka athembele ekuhambeni kwamanye amazwe ukuze athuthukise umnotho wawo futhi ashiywe edabukile.
“Njengamanje, bangu-34% kuphela abantu emhlabeni abagonywe ngokuphelele, okukhombisa ukuthi kusenokungalingani okukhulu kokukhishwa kwemigomo emhlabeni jikelele. Uhlelo lokugoma olusheshayo nolulinganayo, kanye nokwamukelwa okuphindaphindwayo komhlaba wonke kwayo yonke imishanguzo evunyelwe yi-WHO, luyadingeka ukuvula kabusha ngokuphepha uhambo lwamazwe omhlaba futhi luqale ngokushesha umsebenzi wezomnotho.
“I-WTTC iyakubona ukubaluleka kokubuyisela ukuzethemba kwabathengi, futhi siye sathuthukisa, lapho umkhakha kahulumeni kanye nezizimele zisebenzisana, isethi yezimiso ezivumelanisiwe Zohambo Oluvikelekile ezimbonini eziyi-11 kuwo wonke umkhakha Wezokuvakasha Nezokuvakasha. Isitembu sethu se-Safe Travels esaziwayo emhlabeni wonke semukelwe izindawo ezingaphezu kuka-400 emhlabeni jikelele.”
Umhlonishwa u-Ahmed Al Khateeb, Ungqongqoshe Wezokuvakasha waseSaudi Arabia uthe: “Lo mbiko ukhombisa umthelela i-COVID-19 enawo embonini yezokuvakasha neyokuvakasha yomhlaba wonke - kanye nokungalingani kokululama okuqhubekayo manje. Kudingeka sicace: ngaphandle uma ezokuvakasha zilulama umnotho ngeke usimama.
“Kumele sihlangane ukuze seseke le mboni ebucayi, ngaphambi kwalolu bhubhane yayibhekele u-10% we-GDP emhlabeni jikelele. Ngalo mbiko, iSaudi Arabia icela lo mkhakha ukuthi uhlangane ukuze uhlele kabusha ezokuvakasha ukuze uthole ikusasa elisimeme, elibandakanyayo neliqinile. "
Umbiko uveza izincomo zokuzuza ukululama ngokushesha komkhakha Wezokuvakasha Nezokuvakasha, njengoba i-COVID iba ubhubhane.
Ukugxila okugxile ekuhlanganisweni kwamazwe omhlaba ukuvula kabusha imingcele, izimo zokuhlola ezilinganayo, kanye nokwenza i-digitalisation ukuze kube lula ukuhamba, kanye nokusimama kanye nomthelela kwezenhlalo kumongo womkhakha, kuzobuyisa ukuhamba kwamazwe omhlaba kanye nomkhakha Wezokuvakasha Nezokuvakasha. Lezi zinyathelo zizosindisa izigidi zemisebenzi, futhi zenze imiphakathi, amabhizinisi, nezindawo ezithembele kumkhakha Wezokuvakasha Nezokuvakasha, ukuthi zilulame ngokugcwele futhi zichume futhi.